"သင့်အနာဂတ်အတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ P လေးလုံး"
Leadership / Personal Development / Tips & Tricks
“သင့်အနာဂတ်အတွက် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ P လေးလုံး”
- April 20, 2019April 20, 2019 - The Khant
ပထမတော့ “အင်္ဂလိပ်စာကို သင်တန်းတွေ အများကြီးမတက်ဘဲ ထိထိရောက်ရောက် ဘယ်လိုတိုးတက်အောင် လုပ်လို့ရလဲ” ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ရေးမလို့ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် ပြန်ပြီး စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ကျွန်တော် အတော်လေး ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အခြေခံကျပြီး၊ လူတိုင်းအတွက် အသုံးဝင်မယ့် P လေးလုံးကို စရေးရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ တွေးမိတယ်။ အဲ့ဒီ P လေးလုံးရဲ့ မူရင်းစကားလုံးတွေက Passion, Prepare, Practice နဲ့ Persistence တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ P လေးလုံးဟာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက် (ပန်းတိုင်) တွေကြိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာမှာ တကယ်ကို အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ဒီ P လေးလုံးဟာ ဘာကြောင့် ဒီလောက်တောင် အရေးပါလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
Passion ဆိုတာဘာလဲ? Passion ဟာဆိုရင် အရေးအကြီးဆုံး လိုအပ်ချက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “စိတ်အားထက်သန်ပြင်းပြမှု (သို့) ဇော” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရင်ထဲက အမှန်တကယ် လိုချင်တောင့်တပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒကို ဆိုလိုချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် Passion က မိမိလိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ အရေးကြီးသလဲ? ဟုတ်ကဲ့။ Passion က တော်တော်လေးကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာဆိုပါစို့၊ မောင်ဖြူကို သူ့အမေက အရမ်းကို အင်္ဂလိပ်စာ ပြောတတ်စေချင်တယ်။ ဒါပေယမ့် မောင်ဖြူက ဘာသာစကား အသစ်မသင်ချင်ဘူး ( ပျင်းလို့ ဖြစ်နိုင်သလို ကြောက်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။) သူ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ဘောလုံးကန်မယ်၊ online game ဆော့မယ်၊ အပြင်ကိုပဲ လျှောက်သွား ပျော်ပျော်ပါးပါးနေချင်တယ်။ သူ့အမေက သူ့သားအဲ့လိုတွေ ဒီလိုတွေလုပ်နေတာကို မကြိုက်ဘူး။ ဒါကြောင့် မောင်ဖြူကို နာမည်ကြီးတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်တန်းတစ်ခုမှာ တက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ မောင်ဖြူသင်တန်းတက်တာ နှစ်နဲ့ ချီလာပြီ၊ အင်္ဂလိပ်လို မပြောတတ်သေး (သင်တန်းက သင်ပြမှု ပုံစံကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)။ ဘာကြောင့်လဲ??? ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ သူကမှ စိတ်မဝင်စားတာ။ စိတ်တောင် မဝင်စားမှတော့ စိတ်အားထက်သန်ပြင်းပြမှု မရှိဘူးဆိုတာ သိသာပါတယ်။ သူ သင်တန်းသွားတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အထိ ထိုင်တယ်။ အိမ်ကိုပြန်လာတယ်။ ပေးထားတဲ့ အိမ်စာတွေကိုလည်း သေသေချာချာမလုပ်ဘူး။ ဒီလိုသာ လုပ်နေမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ပန်းတိုင်ကို မရောက်ဖို့ သေချာသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာ စကားပုံတစ်ခုတောင်ရှိပါသေးတယ်။ “DO IT WITH ALL YOUR PASSION OR NOT AT ALL” “ဘယ်အရာမဆို စိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်ကိုင်ပါ။ စိတ်အားထက်သန်မှာသာမရှိရင် ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့။ ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Passion ကတော့ရှိပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်ဟာကို ဘယ်ကနေ ဘယ်လိာ စလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီကိစ္စကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ ?? ကျွန်ောတ်တို့ ကိစ္စတစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် “How” “ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ” ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကိုသိရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် အောင်မြင်မှုဆိုတာ မဝေးတော့တဲ့ လမ်းတစ်ကမ်းမှာ ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုသည်လည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဆေးတစ်ခွက်လို တော်တော်လေးကို အရေးပါပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပန်းတိုင်တစ်ခုအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်၊ အားသာချက်တွေကို သိလာရမယ်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမလဲ??ပထမဆုံး မိမိကိုယ်ကို ပြင်ဆင်ချိန် လုံလုံလောက်လောက်ပေးပါ။ လိုအပ်တဲ့ အရာတွေအားလုံးကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းရဲ့ အရေးပါပုံကို အမေရိကန်နိုင်ငံသား ပြိုင်ကားမောင်းချန်ပီယံ Bobby Unser က ” Success is where preparation and opportunity meet” အောင်မြင်မှုဆိုတာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ အခွင့်အလမ်းတို့ရဲ့ ဆုံမှတ်ပါ။ ဟုလည်းကောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ၁၆ ဆက်မြောက် သမ္မတဖြစ်တဲ့ Abraham Lincoln က “If I have eight hours to chop downatree, I’d spend six sharpening the axe” ကျွန်တော့်မှာ သစ်ပင်တစ်ပင်ကို ခုတ်လှဲဖို့အချိန် ၈ နာရီရခဲ့ရင် ၆ နာရီကို ကျွန်တော့်ရဲ့ ပုဆိန်သွေးဖို့အတွက် အသုံးပြုသွားမှာပါ” ဟု လည်းကောင်းဆိုကာ ဖော်ပြထားကြပါတယ်။
Passion လည်းရှိပြီ။ ဘာတွေကို ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သိပြီး Prepare လည်းလုပ်ပြီးပြီ။ ဒါနဲ့တင် လုံလောက်ပြီလား ?? ဘာလုပ်ဖို့လိုသေးလဲ ?? လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထို Plan တွေကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် လေ့ကျင့်မှုက အခရာကျပါတယ်။ “အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာ” ဆိုသလို မိမိပန်းတိုင်ကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ရောက်ရှိနိုင်ဖို့ အစကတည်းက စနစ်တကျလေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်မှုလည်း လိုပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ လူတိုင်းကို ကျွန်တော်တို့ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ (Leo Messi) လီယိုမက်ဆီ ရဲ့ အကြောင်း။ မက်ဆီဟာဆိုရင် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘောလုံးထူးချွန်ဆုတွေ အများကြီးရပြီး၊ သူ့နယ်ပယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လူတွေအကုန်လုံးရဲ့ ချီးမွမ်း၊ ဂုဏ်ပြုပြီး အသိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ နာမည်ကျော် ဘောလုံးကစားသမားတစ်ယောက်။ သူအခုလို ဆုတွေအများကြီးကို ဘယ်လိုရခဲ့တာလဲ?? ဘာကြောင့်ရခဲ့တာလဲ?? သူဘာမှမလုပ်ပဲ ထိုင်နေလို့ရခဲ့တာလား?? ကံအရမ်းကောင်းလို့လား?? ပါရမီပါလို့လား?? သူဒီလိုဆုတွေအများကြီးရခဲ့တယ်ဆိုတာ ခိုင်လုံတဲ့ အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ အထက်ပါဖော်ပြချက်တွေထဲက ပါဝင်သလို၊ သူ့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ လေ့ကျင့်မှုလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ သူ့ကစားဖော်နဲ့အတူ လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းမှာလည်း တခြားကစားသမားတွေ ၁ နာရီလေ့ကျင့်ရင်၊ သူ ၃၊၄ နာရီ ပိုလုပ်တယ်။ သူ့လေ့ကျင့်မှုတွေရဲ့ ရလဒ်က ဘာတွေလဲ?? အောင်မြင်မှုပါပဲ။ သူများထက် ပိုတော်၊တတ်ချင်ရင် သူများထက်ပို ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ လေ့ကျင့်မှု အရေးပါပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံသား စာရေးဆရာ (Malcom Gladwell)”မယ်ကွန် ဂလတ်ဝယ်”က “It takes 10,000 hours of deliberate practice to become an expert” နယ်ပယ်တစ်ခုမှာ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ဖို့ နာတစ်သောင်း အပြင်းအထန် လေ့ကျင့်ဖို့လိုတယ်လို့ ပြောဖူးပါတယ်။ “Practice makes perfect” လေ့ကျင့်ခြင်းက သင့်ရဲ့ ပန်းတိုင်ကိုအောင်မြင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်” ဆိုတဲ့ စကားပုံတောင်ရှိပါသေးတယ်။
Persistence (မဆုတ်မနစ်ကြိုးပမ်းမှု သို့ ဇွဲ)
ကိုယ့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကို အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ အောင်မြင်မှုကို အချိန်တိုအတွင်းရနိုငိသလို၊ အကြိမ်ကြိမ်ကျရှုံးပြီးမှလည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဘဝမှာ မကျရှုံးဖူးတဲ့သူဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကြိမ်ဖန်များစွာ ကျရှုံးတဲ့သူရယ်၊ အကြိမ်အရေအတွက် နည်းနည်း ကျရှုံးဖူးတဲ့သူရယ်ဘဲရှိပါတယ်။ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ သူတိုင်းကိုလေ့လာကြည့်ရင်လည်း သူတို့မအောင်မြင်သေးတဲ့ အချိန်အတွင်း ကျရှုံးမှုတွေကို ဘယ်လောက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရဖူးတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ထူးခြားချက်တစ်ခုက သူတို့ ရည်မှန်းထားတဲ့ ပန်းတိုင်ကို မရောက်မချင်းဇွဲရှိရှိနဲ့ ကြိုးစားကြတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ သူတို့ရဲ့ ပန်းတိုင်ကို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပဲ ရောက်ရှိသွားကြတယ်။ ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် အမေရိကန်နိုင်ငံသူ “Harry Potter” “ဟယ်ရီပေါ်တာ” ဇာတ်လမ်းကို ရေးသားခဲ့သော စာရေးဆရာမ “J.K.Rowling” “ဂျေ ခေ ရိုးလင်း” ဟာဆိုရင် “Harry Potter” စာအုပ်ကိုထုတ်ဖို့ စာအုပ်တိုက်မှာ သွားရောက်တင်သွင်းတာ ၁၂ ကြိမ်တိတိ အပယ်ခံရခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမလက်မလျှော့ပဲ ဆက်ကြိုးစားတယ်။ ၁၃ကြိမ်မြောက်မှာ စာအုပ်တိုက်က လက်ခံတယ်။နောက်ဆုံး အဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့ စတင် နာမည်ကျော်လာပြီး ယခုလက်ရှိ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံး စာရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်လာတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံသား “Alibaba Group” “အလီဘာဘာ ဂရု” တည်ထောင်သူ “Jack Ma” “ဂျက်မား” ဟာဆိုရင်လည်း ဘဝမှာကျရှုံးမှုတွေ အများကြီး ကြုံခဲ့ရတယ်။ သူ “Harvard” “ဟားဗက်” တက္ကသိုလ်မှာ ၁၀ ကြိမ်တိတိ ကျောင်းလျှောက်ခဲ့ပြီး သူ့လျှောက်လွှာပယ်ချခံခဲ့ရတယ်။ KFC ဆိုင်မှာ သူအပါအဝင် လူ ၂၄ ယောက် အလုပ်သွားလျှောက်တယ်။ သူကလွဲပြီး ကျန် ၂၃ ယောက် အလုပ်ရခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျရှုံးမှုတွေ အခု ၃၀ ထက်မနည်း ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ မဆုတ်မနစ်ဇွဲကြောင့် ထပ်ကာထပ်ကာ ကြိုးစားရင်း ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးလူတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ သူတွိုလို အောင်မြင်သူတွေကို ဥပမာထားကာဘဝမှာ ဇွဲမလျှော့ဘဲ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့ အရေးကြီးပုံကို ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ “Winners never quit, quitters never win” “ဘဝမှာ အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေက ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးပါဘူး။ အရှုံးပေးတဲ့သူတွေကလည်း ဘယ်တော့မှ အနိုင်ရလေ့မရှိပါဘူး” ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးလည်းရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ ဒီ P လေးလုံးကို ဆောင်ထားကြပါစို့။ တခြားသော အောင်မြင်မှုတွေအတွက် ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်နောက်ထပ် ရေးပြီးတင်ပေးပါ့မယ်။ အဆုံးထိဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
“သငျ့အနာဂတျအတှကျ ဆောငျထားသငျ့တဲ့ P လေးလုံး”
ပထမတော့ “အင်ျဂလိပျစာကို သငျတနျးတှေ အမြားကွီးမတကျဘဲ ထိထိရောကျရောကျ ဘယျလိုတိုးတကျအောငျ လုပျလို့ရလဲ” ဆိုတဲ့ အကွောငျးကို ရေးမလို့ပါဘဲ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတေျာ့ ပွနျပွီး စဉျးစားကွညျ့တဲ့အခါ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲမှာ ကြှနျတျော အတျောလေး ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အခွခေံကပြွီး၊ လူတိုငျးအတှကျ အသုံးဝငျမယျ့ P လေးလုံးကို စရေးရငျ ပိုကောငျးမယျလို့ တှေးမိတယျ။ အဲ့ဒီ P လေးလုံးရဲ့ မူရငျးစကားလုံးတှကေ Passion, Prepare, Practice နဲ့ Persistence တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီ P လေးလုံးဟာဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြ (ပနျးတိုငျ) တှကွေိ အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျရာမှာ တကယျကို အသုံးဝငျပါတယျ။ ဒါဆို ကြှနျတျောတို့ ဒီ P လေးလုံးဟာ ဘာကွောငျ့ ဒီလောကျတောငျ အရေးပါလဲဆိုတာကို ကွညျ့လိုကျကွရအောငျ။
Passion ဆိုတာဘာလဲ? Passion ဟာဆိုရငျ အရေးအကွီးဆုံး လိုအပျခကျြတှထေဲက တဈခုဖွဈတဲ့ “ဈတျအားထကျသနျပွငျးပွမှု (သို့) ဇော” ပဲ ဖွဈပါတယျ။ မိမိရငျထဲက အမှနျတကယျ လိုခငျြတောငျ့တပွီး ဖွဈပျေါလာတဲ့ ပွငျးပွတဲ့ဆန်ဒကို ဆိုလိုခငျြပါတယျ။ ဘာကွောငျ့ Passion က မိမိလိုခငျြတဲ့ ပနျးတိုငျကို ရောကျဖို့ အရေးကွီးသလဲ? ဟုတျကဲ့။ Passion က တျောတျောလေးကို အရေးကွီးပါတယျ။ ဥပမာဆိုပါစို့၊ မောငျဖွူကို သူ့အမကေ အရမျးကို အင်ျဂလိပျစာ ပွောတတျစခေငျြတယျ။ ဒါပယေမျ့ မောငျဖွူက ဘာသာစကား အသဈမသငျခငျြဘူး ( ပငျြးလို့ ဖွဈနိုငျသလို ကွောကျလို့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။) သူ့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ပဲ ဘောလုံးကနျမယျ၊ online game ဆော့မယျ၊ အပွငျကိုပဲ လြှောကျသှား ပြျောပြျောပါးပါးနခေငျြတယျ။ သူ့အမကေ သူ့သားအဲ့လိုတှေ ဒီလိုတှလေုပျနတောကို မကွိုကျဘူး။ ဒါကွောငျ့ မောငျဖွူကို နာမညျကွီးတဲ့ အင်ျဂလိပျစကားပွော သငျတနျးတဈခုမှာ တကျခိုငျးလိုကျတယျ။ မောငျဖွူသငျတနျးတကျတာ နှဈနဲ့ ခြီလာပွီ၊ အင်ျဂလိပျလို မပွောတတျသေး (သငျတနျးက သငျပွမှု ပုံစံကွောငျ့လညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ)။ ဘာကွောငျ့လဲ??? ဒါကတော့ ရှငျးပါတယျ။ သူကမှ စိတျမဝငျစားတာ။ စိတျတောငျ မဝငျစားမှတော့ စိတျအားထကျသနျပွငျးပွမှု မရှိဘူးဆိုတာ သိသာပါတယျ။ သူ သငျတနျးသှားတယျ။ သတျမှတျထားတဲ့ အခြိနျအထိ ထိုငျတယျ။ အိမျကိုပွနျလာတယျ။ ပေးထားတဲ့ အိမျစာတှကေိုလညျး သသေခြောခြာမလုပျဘူး။ ဒီလိုသာ လုပျနမေယျဆိုရငျ သူ့ရဲ့ပနျးတိုငျကို မရောကျဖို့ သခြောသလောကျဖွဈနပေါပွီ။ အင်ျဂလိပျဘာသာစကားမှာ စကားပုံတဈခုတောငျရှိပါသေးတယျ။ “DO IT WITH ALL YOUR PASSION OR NOT AT ALL” “ဘယျအရာမဆို စိတျအားထကျသနျစှာလုပျကိုငျပါ။ စိတျအားထကျသနျမှာသာမရှိရငျ ဘာမှမလုပျပါနဲ့။ ဆိုပွီး ဖွဈပါတယျ။
Passion ကတော့ရှိပါပွီ။ ဒါပမေဲ့ ဘယျဟာကို ဘယျကနေ ဘယျလိာ စလုပျရမှနျးမသိဘူးဖွဈနတေယျ။ ဒီကိစ်စကို ဘယျလိုဖွရှေငျးရမလဲ ?? ကြှနျောတျတို့ ကိစ်စတဈခုကို ဆောငျရှကျဖို့အတှကျ “How” “ဘယျလိုလုပျရမလဲ” ဆိုတဲ့ နညျးလမျးကိုသိရငျ ကြှနျတျောတို့အတှကျ အောငျမွငျမှုဆိုတာ မဝေးတော့တဲ့ လမျးတဈကမျးမှာ ဖွဈသှားပါပွီ။ ဒီအတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျမှုသညျလညျး မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ ဆေးတဈခှကျလို တျောတျောလေးကို အရေးပါပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ပနျးတိုငျတဈခုအတှကျ ကွိုတငျပွငျဆငျတဲ့အခါမှာ ကိုယျ့ရဲ့အားနညျးခကျြ၊ အားသာခကျြတှကေို သိလာရမယျ။ ဒါဆိုရငျ ဘယျလို ကွိုတငျပွငျဆငျရမလဲ??ပထမဆုံး မိမိကိုယျကို ပွငျဆငျခြိနျ လုံလုံလောကျလောကျပေးပါ။ လိုအပျတဲ့ အရာတှအေားလုံးကို ကွိုတငျပွငျဆငျပါ။ ကွိုတငျပွငျဆငျခွငျးရဲ့ အရေးပါပုံကို အမရေိကနျနိုငျငံသား ပွိုငျကားမောငျးခနျြပီယံ Bobby Unser က ” Success is where preparation and opportunity meet” အောငျမွငျမှုဆိုတာ ကွိုတငျပွငျဆငျမှုနဲ့ အခှငျ့အလမျးတို့ရဲ့ ဆုံမှတျပါ။ ဟုလညျးကောငျး၊ အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ ၁၆ ဆကျမွောကျ သမ်မတဖွဈတဲ့ Abraham Lincoln က “If I have eight hours to chop downatree, I’d spend six sharpening the axe” ကြှနျတေျာ့မှာ သဈပငျတဈပငျကို ခုတျလှဲဖို့အခြိနျ ၈ နာရီရခဲ့ရငျ ၆ နာရီကို ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ပုဆိနျသှေးဖို့အတှကျ အသုံးပွုသှားမှာပါ” ဟု လညျးကောငျးဆိုကာ ဖျောပွထားကွပါတယျ။
Passion လညျးရှိပွီ။ ဘာတှကေို ဘယျလို လုပျရမယျဆိုတာကို သိပွီး Prepare လညျးလုပျပွီးပွီ။ ဒါနဲ့တငျ လုံလောကျပွီလား ?? ဘာလုပျဖို့လိုသေးလဲ ?? လိုပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ ထို Plan တှကေို အကောငျအထညျဖျော ဆောငျရှကျဖို့အတှကျ လကေ့ငျြ့မှုက အခရာကပြါတယျ။ “အစကောငျးမှ အနှောငျးသခြော” ဆိုသလို မိမိပနျးတိုငျကို အခြိနျတိုအတှငျးမှာ ရောကျရှိနိုငျဖို့ အစကတညျးက စနဈတကလြကေ့ငျြ့ဆောငျရှကျမှုလညျး လိုပါတယျ။ ကမ်ဘာပျေါမှာ အောငျမွငျကြျောကွားနတေဲ့ လူတိုငျးကို ကြှနျတျောတို့ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။ ဥပမာတဈခုပွောရမယျဆိုရငျ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ဘောလုံးသမားတှထေဲက တဈယောကျဖွဈတဲ့ (Leo Messi) လီယိုမကျဆီ ရဲ့ အကွောငျး။ မကျဆီဟာဆိုရငျ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ဘောလုံးထူးခြှနျဆုတှေ အမြားကွီးရပွီး၊ သူ့နယျပယျနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ လူတှအေကုနျလုံးရဲ့ ခြီးမှမျး၊ ဂုဏျပွုပွီး အသိအမှတျပွုခံထားရတဲ့ နာမညျကြျော ဘောလုံးကစားသမားတဈယောကျ။ သူအခုလို ဆုတှအေမြားကွီးကို ဘယျလိုရခဲ့တာလဲ?? ဘာကွောငျ့ရခဲ့တာလဲ?? သူဘာမှမလုပျပဲ ထိုငျနလေို့ရခဲ့တာလား?? ကံအရမျးကောငျးလို့လား?? ပါရမီပါလို့လား?? သူဒီလိုဆုတှအေမြားကွီးရခဲ့တယျဆိုတာ ခိုငျလုံတဲ့ အကွောငျးပွခကျြရှိပါတယျ။ အထကျပါဖျောပွခကျြတှထေဲက ပါဝငျသလို၊ သူ့ရဲ့ ကွိုးစားအားထုတျမှု၊ လကေ့ငျြ့မှုလညျး ပါဝငျပါတယျ။ သူ့ကစားဖျောနဲ့အတူ လကေ့ငျြ့ခနျးဆငျးတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးမှာလညျး တခွားကစားသမားတှေ ၁ နာရီလကေ့ငျြ့ရငျ၊ သူ ၃၊၄ နာရီ ပိုလုပျတယျ။ သူ့လကေ့ငျြ့မှုတှရေဲ့ ရလဒျက ဘာတှလေဲ?? အောငျမွငျမှုပါပဲ။ သူမြားထကျ ပိုတျော၊တတျခငျြရငျ သူမြားထကျပို ကွိုးစားဖို့လိုပါတယျ။ လကေ့ငျြ့မှု အရေးပါပုံနဲ့ ပတျသကျပွီး ဗွိတိနျနိုငျငံသား စာရေးဆရာ (Malcom Gladwell)”မယျကှနျ ဂလတျဝယျ”က “It takes 10,000 hours of deliberate practice to become an expert” နယျပယျတဈခုမှာ ကြှမျးကငျြသူဖွဈဖို့ နာတဈသောငျး အပွငျးအထနျ လကေ့ငျြ့ဖို့လိုတယျလို့ ပွောဖူးပါတယျ။ “Practice makes perfect” လကေ့ငျြ့ခွငျးက သငျ့ရဲ့ ပနျးတိုငျကိုအောငျမွငျအောငျ လုပျပေးနိုငျပါတယျ” ဆိုတဲ့ စကားပုံတောငျရှိပါသေးတယျ။
Persistence (မဆုတျမနဈကွိုးပမျးမှု သို့ ဇှဲ)
ကိုယျ့ရဲ့ပနျးတိုငျကို အကောငျထညျဖျောဆောငျရှကျလိုကျတဲ့အခါမှာ အောငျမွငျမှုကို အခြိနျတိုအတှငျးရနိုငိသလို၊ အကွိမျကွိမျကရြှုံးပွီးမှလညျး ရနိုငျပါတယျ။ ဘဝမှာ မကရြှုံးဖူးတဲ့သူဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကွိမျဖနျမြားစှာ ကရြှုံးတဲ့သူရယျ၊ အကွိမျအရအေတှကျ နညျးနညျး ကရြှုံးဖူးတဲ့သူရယျဘဲရှိပါတယျ။ အောငျမွငျကြျောကွားနတေဲ့ သူတိုငျးကိုလလေ့ာကွညျ့ရငျလညျး သူတို့မအောငျမွငျသေးတဲ့ အခြိနျအတှငျး ကရြှုံးမှုတှကေို ဘယျလောကျရငျဆိုငျခဲ့ရဖူးတယျဆိုတာကိုလညျး ကြှနျတျောတို့ မွငျနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ ထူးခွားခကျြတဈခုက သူတို့ ရညျမှနျးထားတဲ့ ပနျးတိုငျကို မရောကျမခငျြးဇှဲရှိရှိနဲ့ ကွိုးစားကွတယျ။ နောကျဆုံးတော့ သူတို့ရဲ့ ပနျးတိုငျကို အောငျအောငျမွငျမွငျနဲ့ပဲ ရောကျရှိသှားကွတယျ။ ဥပမာပွောရမယျဆိုရငျ အမရေိကနျနိုငျငံသူ “Harry Potter” “ဟယျရီပျေါတာ” ဇာတျလမျးကို ရေးသားခဲ့သော စာရေးဆရာမ “J.K.Rowling” “ဂြေ ခေ ရိုးလငျး” ဟာဆိုရငျ “Harry Potter” စာအုပျကိုထုတျဖို့ စာအုပျတိုကျမှာ သှားရောကျတငျသှငျးတာ ၁၂ ကွိမျတိတိ အပယျခံရခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူမလကျမလြှော့ပဲ ဆကျကွိုးစားတယျ။ ၁၃ကွိမျမွောကျမှာ စာအုပျတိုကျက လကျခံတယျ။နောကျဆုံး အဲ့ဒီစာအုပျနဲ့ စတငျ နာမညျကြျောလာပွီး ယခုလကျရှိ ကမ်ဘာ့အခမျြးသာဆုံး စာရေးဆရာမတဈဦးဖွဈလာတယျ။ တရုတျနိုငျငံသား “Alibaba Group” “အလီဘာဘာ ဂရု” တညျထောငျသူ “Jack Ma” “ဂကျြမား” ဟာဆိုရငျလညျး ဘဝမှာကရြှုံးမှုတှေ အမြားကွီး ကွုံခဲ့ရတယျ။ သူ “Harvard” “ဟားဗကျ” တက်ကသိုလျမှာ ၁၀ ကွိမျတိတိ ကြောငျးလြှောကျခဲ့ပွီး သူ့လြှောကျလှာပယျခခြံခဲ့ရတယျ။ KFC ဆိုငျမှာ သူအပါအဝငျ လူ ၂၄ ယောကျ အလုပျသှားလြှောကျတယျ။ သူကလှဲပွီး ကနျြ ၂၃ ယောကျ အလုပျရခဲ့တယျ။ ဒီလိုနဲ့ ကရြှုံးမှုတှေ အခု ၃၀ ထကျမနညျး ရှိခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့ မဆုတျမနဈဇှဲကွောငျ့ ထပျကာထပျကာ ကွိုးစားရငျး ဒီနဒေီ့အခြိနျမှာ ကမ်ဘာ့အခမျြးသာဆုံးလူတှထေဲက တဈယောကျဖွဈနပေါပွီ။ သူတှိုလို အောငျမွငျသူတှကေို ဥပမာထားကာဘဝမှာ ဇှဲမလြှော့ဘဲ လုပျကိုငျဆောငျရှကျဖို့ အရေးကွီးပုံကို ထငျရှားစှာတှမွေ့ငျနိုငျပါတယျ။ “Winners never quit, quitters never win” “ဘဝမှာ အောငျမွငျနတေဲ့သူတှကေ ဘယျတော့မှ အရှုံးမပေးပါဘူး။ အရှုံးပေးတဲ့သူတှကေလညျး ဘယျတော့မှ အနိုငျရလမေ့ရှိပါဘူး” ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးလညျးရှိပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ ကြှနျတျောတို့ဘဝမှာ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ ပနျးတိုငျကိုရောကျဖို့ ဒီ P လေးလုံးကို ဆောငျထားကွပါစို့။ တခွားသော အောငျမွငျမှုတှအေတှကျ ကွိုးစားဖို့လိုအပျတဲ့ လိုအပျခကျြတှကေိုလညျး ကြှနျတျောနောကျထပျ ရေးပွီးတငျပေးပါ့မယျ။ အဆုံးထိဖတျပေးတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျ။